कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिने ‘स्क्रब टाइफस’ के हो ? -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ३०, २०७८ समय: २१:२९:४६
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका ‘स्क्रब टाइफस’ रोग देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय अस्पतालमा उपचार गराउन आउने स्क्रब टाइफसका बिरामी बढ्न थालेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डा. विमल शर्मा चालिसेका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा समेत फाटफुट्ट स्क्रब टाइफसका बिरामी फेला परेका छन् ।
यो रोगको लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपनि स्क्रब टाइफसको परीक्षण गर्न उनी सुझाव दिन्छन् । स्क्रब टाइफसको लक्षण देखिएमा समयमै परीक्षण गरी यसको पहिचान गर्न सके स्क्रब टाइफसबाट बच्न सकिने उनको भनाइ छ । घर वरिपरि घाँसहरु बढ्न नदिने, वातावरण सफा राख्ने, मुसा नियन्त्रणका लागि उपयुक्त ढंगले अन्नको भण्डारण गर्नुपर्दछ ।